တစ် ဦး Monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်များအတွက်လူမှုရွေးချယ်မှု၏ Dopamine စည်းမျဉ်း (2009) - သင့် ဦး နှောက်အပေါ်
တစ်ဦး Monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်သစ်အတွက်လူမှုရွေးချယ်မှု၏ Dopamine စည်းမျဉ်းဥပဒေ (2009)
အပြည့်အဝလေ့လာမှု: တစ် Monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်သစ်အတွက်လူမှုရွေးချယ်မှု၏ Dopamine စည်းမျဉ်းဥပဒေ
Brandon ဂျေ Aragona1,* နှင့် Zuoxin ဝမ်2
လူသားတွေအတွက်အောင်လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် hedonic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ကလွှမ်းမိုးကြောင်းကြီးထွားလာနျဖိုးထားရှိပါသည်။ လူမှုရေး neuroeconomics ၏လယ်ပြင်ဆုလာဘ်များအတွက်အရေးကြီးသောအာရုံကြောစနစ်များလူမှုရေးရွေးချယ်မှုနှင့်လူသားတွေအတွက်လူမှုရေးဦးစားပေးနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဦး monogamous ကြွက်မျိုးစိတ်အတွက်လူမှုရေးဦးစားပေး၏ neurobiology, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လည်းဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့တွင်ပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောစနစ်များအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကြောင်းပြသပါ။ အထူးသကျနော်တို့ dopamine ဂီယာ differential ဒီမျိုးစိတ်အတွက် monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates ဘယ်လို mesolimbic ကိုဖော်ပြရန်။ ထို့ကြောင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်ဦးမဟုတ်ဘဲရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး၏အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ကြောင်းလူမှုရေးရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေကိုကျော်ကြီးမားတဲ့စည်းမျဉ်းပြုပြင်။ ကျနော်တို့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လူမှုရေးရွေးချယ်မှု၏ neuroscience အဘို့နှင့်ရှုပ်ထွေးသောလူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချစေ့စ့စပ်စပ်ဆုလာဘ်များနှင့် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့အားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ကိုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်သည့်စနစ်ဖြစ်ကြောင်းကောက်ချက်ချ။
keywords: နျူကလိယ accumbens, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole, မယား, လူမှုရေးပူးတွဲမှု, pair တစုံနှောင်ကြိုး, လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချ, လူမှုရေး neuroeconomics
လူမှုရေးအခင်းအကျင်းများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသိသိသာသာကိုအခြားသူများ (Fehr နှင့် Camerer များ၏သက်သာချောင်ချိရေးတို့အတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့သို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာစိုးရိမ်ပူပန်မှုကလွှမ်းမိုးနေသည်, 2007) ။ လူသားတွေဟာတရားမျှတမှုတစ်ခိုင်မာတဲ့အသိအပေါ်လုပ်ရပ်, လူတွေစေတနာရှိရှိပြုမူသောရှေးခယျြမှုအပြုအမူမှတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသကြသည်ခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးဦးစားပေးပြသ, နှင့် (Krueger et al ယုံကြည်စိတ်ချဖို့ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်ရှိသည်။ , 2007; Sanfey, 2007; Tankersley et al ။ , 2007; Zak et al ။ , 2004) ။ အမှန်စင်စစ်လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချသောလူသားမြား၌ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးစိတ် (Skuse နှင့် Gallagher, သီးသန့်ကြောင်းလူမှုရေးသိမှတ်ခံစားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်အောင်ရှုပ်ထွေးဖြစ်ပါသည် 2009) ။ သို့သော်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှုထောင့်ကနေ, ထိုကဲ့သို့သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုအဖြစ်လိုလားတဲ့လူမှုအပြုအမူ Rilling et al (အဓိပ်ပါယျမရှိသောသို့မဟုတ်ယျကြိုးစှနျ့သာအပေါ်ယံဖြစ်ကြသည်။ , 2002; Sanfey, 2007) ။ ထိုသို့သောအပြုအမူနိုင်ရန်အတွက်အဖွဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီစွမ်းအင်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြုန်းဖို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်ရရှိလာတဲ့လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး၏အတော်လေးကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုလက်ခံရရှိရန်အဘို့အကသပ္ပါယ်ခဲ့သည့်အတွက်အနီးကပ်လူမှုရေးအုပ်စုများ, (အကြားအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုမျက်နှာသာကြောင်းရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း Pfeiffer et al ။ , 2005; Rutte နှင့် Taborsky, 2007; Trivers, 1971) ။ ဒီရှုထောင့်ကနေကျနော်တို့အလားတူလိုလားသူလူမှုရေးအပြုအမူတွေအဖြစ်ထိရောက်သောဓာတ်ခွဲခန်းမော်ဒယ်များအစေခံခြင်းနှင့်အရှင်လူမှုရေးရွေးချယ်မှုအပြုအမူနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်ပြုနိုင်သည်ကိုကတခြားမျိုးစိတ်ဖော်ပြခံရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ (တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်စနစ်၏ပုံကိုအသုံးပြုမှုသည်လူမှုရေးအရ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ဖော်ပြရန်Microtus ochrogaster), သိသိသာသာလူမှုရေးရွေးချယ်မှုအပြုအမူ (Carter က et al များ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုချီတက်လျက်ရှိသည်။ , 1995; Dewsbury, 1987; Getz နှင့် Carter က, 1996; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004) ။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အပြုအမူ၏အကျဉ်းခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးနှင့်ဤမျိုးစိတ်များ၏ရှုပ်ထွေးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကအကြီးအကျယ်နှစ်ခု '' ရှေးခယျြမှု '' အပြုအမူအားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်အကြံပြု: တစ်အကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက်၏ကနဦးဦးစားပေးများနှင့်ရှောင်ရှားသို့မဟုတ်မှထုတ်ပြန်သောငြင်းပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက် ( Carter ကနှင့် Getz, 1993; Getz နှင့် Hofmann, 1986; Insel နှင့်လူငယ်တို့, 2001) ။ ကျနော်တို့ထို့နောက် Aragona နှင့်ဝမ် (အနျူကလိယ accumbens (NAc) အတွင်းအချက်ပြ dopamine, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အရေးကြီးသောအာရုံကြောဂီယာအားဖြင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေးအပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကိုဖော်ပြရန်အများအပြားမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကနေ (DA) ဒေတာကိုမီးမောင်းထိုးပြ 2007; Aragona et al ။ , 2003, 2006) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချလူသားမြားသညျ (Fisher က et al အတွက်များ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းလေ့လာကြပြီလေ့လာမှုများဤတွေ့ရှိချက်များနှိုင်းယှဉ်။ , 2005; Kosfeld et al ။ , 2005; Rilling et al ။ , 2002) ။ ဤရွေ့ကားနှိုင်းယှဉ်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်သည့်စနစ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုလူသားများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကြားလူမှုရေးရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေ၏ neuroscience အကြားဒီကဗျာတူညီထုတ်ဖေါ်။ ထိုမှတပါး, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတခုမဟုတ်ဘဲကြီးမားသောအတိုင်းအတာအများအားဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်မဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေအားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလူမှုရေး neuroeconomics (Cacioppo et al ၏လေ့လာမှုများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သက်ရောက်မှုတွေရှိစေခြင်းငှါ။ , 2000; Lee က, 2008).
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ Vole မော်ဒယ်
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles သေးငယ်တဲ့ကြွက် (~40 များမှာ ဂရမ်) (ပုံ (Figure1A) 1တစ်ဦးက) ကုရှ et al (ဗဟိုအမရေိကနျပွညျထောငျစု၏မြက်ခင်းပြင်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ဖြန့်ဝေ။ , 2001; ခန်းမ, 1981; Hoffman ဟာနှင့် Koeppl, 1985) ။ ဤရွေ့ကားကြွက်တစ်ဦး monogamous လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး (Dewsbury, ပြသသောနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ် (3-5%) ၏လူနည်းစုအကြားရှိပါတယ် 1987) ။ ဒီလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဘုံနယ်မြေဝေမျှတဲ့မျိုးဆက်များ pair တစုံအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိဘ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြားတည်ငြိမ်ဆက်ဆံရေးမျိုး (Aragona နှင့်ဝမ်အဖြစ်သတ်မှတ်သော '' တစ်စုံနှောင်ကြိုး 'ဖြစ်ပါသည် 2004) ။ ဒီမျိုးစိတ်ပိုင်းတွင်အထီး-အမျိုးသမီးအားလုံး (အတူတကွ Getz et al ခရီးသွားလာကြောင်းပြသရသောလယ်ကိုလေ့လာမှုများအားဖြင့် monogamous အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ , 1981), ခွေးများ (Getz နှင့် Hofmann ၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအမှိုက်သရိုက်များနှင့်အတူအသိုက် share, 1986), နှင့်မှထုတ်ပြန်သော၎င်းတို့၏ပိုင်နက် (Getz မှမသက်ဆိုင်သောကျူးကျော်သူတွေကတွန်းလှန် 1978) ။ ထို့ပြင်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, Getz နှင့် Carter က (မိဘစောင့်ရှောက်မှုမြင့်မားကိုပြသ 1996; သောမတ်စ်နှင့် Birney, 1979) နှင့်ကမိဘနှစ်ပါးစလုံးအလွန်အမင်းမွဲ pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်အဘို့ကိုရှေးခယျြထားတဲ့ pup ရှင်သန်ရပ်တည်ရေး (Emlen နှင့် Oring များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည် 1977; Kleiman, 1977; McGuire et al ။ , 1993; ဝမ်နှင့် Novak, 1992) ။ အမှန်မှာထို pair တစုံနှောင်ကြိုး Getz နှင့် Carter က (ထိုတစ်စုံတစ်ကျန်ရစ်သူအဖွဲ့ဝင်နှောင်ကြိုး၏အခြားအဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဆုံးရှုံးရင်တောင်အသစ်တခုအိမ်ထောင်ဖက်ကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ဒါကြောင့်တည်ငြိမ်ဖြစ်ပါသည်, 1996; သောမတ်စ်နှင့် Wolff, 2004) ။ ဤသည်တိရစ္ဆာန်၏ Self-အကျိုးစီးပွားအတွက်မဟုတ်ပေနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ဂန္စီးပွားရေးမော်ဒယ်များနှင့်အတူပဋိပက္ခ သို့ဖြစ်. ကြောင်းအပြုအမူတစ်ခုခိုင်မာတဲ့သာဓကကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်. (က) အရွယ်ရောက်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏ဓာတ်ပုံ။ (ခ) မိတ်ဖက် preference ကိုယန္တရား၏ကာတွန်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုအိတ်များတူညီသည်နှင့်အစားအစာနှင့်ရေရရှိနိုင်ပါ ကြော်ငြာ libitum အဆိုပါ 3-ဇစမ်းသပ်မှုတစ်လျှောက်လုံး။ (C) တစ်ဦးအီစထိုဂျင်-ရစေတယ်နှင့်အတူတွဲအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ...
အရေးကြီးတာက, သဘောသဘာဝအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့် monogamous အပြုအမူတွေကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချရသောဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများ (Carter ကနှင့် Getz အောက်မှာဖော်ပြလေ့ရှိပါသည်, 1993; Carter က et al ။ , 1995) ။ ဥပမာ, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ဦးစားတစ်ဝတ္ထု conspecific (Dewsbury, နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူမိတ် 1975, 1987; မီးခိုးရောင်နှင့် Dewsbury, 1973) ။ မိတ်လိုက်ပြီးနောက်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles, ကိုယ်ဝန် (McGuire နှင့် Novak စဉ်အတွင်းအတူတကွဆက်လက်တည်ရှိ 1984; သောမတ်စ်နှင့် Birney, 1979) နှင့်ဒီအောင်မြင်သောကိုယ်ဝန် (McGuire et al နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ , 1992) ။ သူတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသကဲ့သို့, အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမိဘစောင့်ရှောက်မှုအလွန်မြင့်မား (Oliveras နှင့် Novak ပြ 1986) ။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, pair တစုံဘွန်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအဆိုပါစုံတွဲကိုနှောင်ကြိုးများဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ဆက်စပ်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေကနေပေါ်မူတည်ပြီးလူမှုရေးဦးစားပေး (Williams က et al တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင်အကဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004).
Pair ကိုဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ Maintenance ၏ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအထီးဘာသာရပ်များ (Aragona နှင့်ဝမ်ကနေစုဆောင်းဒေတာကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် 2007; Aragona et al ။ , 2003, 2006) ။ သို့သော်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (ချို et al အပေါ်ကောက်ယူကျယ်ပြန့်အလုပ်ကိုရှိခဲ့သည်။ , 1999; မုဆိုး et al ။ , 2002; Insel နှင့် Hulihan, 1995; Williams က et al ။ , 1992; Witt et al ။ , 1991) နှင့်ဒေတာအမျိုးသမီးဘာသာရပ်များသုံးပြီးစုဆောင်းခဲ့ကြသည့်အခါသူကမှတ်ချက်ချလိမ့်မည်။ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက်တစ်ဦးကလိုအပ်သောပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအထီးသူတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောအယ်လ်ဝတ္ထုအမျိုးသမီး (Fiorino et နှင့်အတူမိတ်ရန်ပိုနှစ်သက်ကတည်းကအများဆုံးနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေမျိုးစိတ်အတွက်အထီးအဘို့အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရာသစ်တစ်ခုအိမ်ထောင်ဖက်ကျော်ဟာသူတို့ရဲ့အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်, ကြိုက်တတ်တဲ့ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ , 1997) ။ သို့သျောလညျးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles တစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်အမျိုးသမီး (Dewsbury နှင့်အတူမိတ်ရန်ပိုနှစ်သက် 1987) နှင့်အသစ်သောအမျိုးသမီး၏တင်ပြချက်လိင်ဝအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Grey ကနှင့် Dewsbury အတွက်သုတ်ရည်ထိသွေးဆောင်ပါဘူး 1973).
တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်းအပြင်, pair တစုံဘွန်းလည်းယောက်ျားကသူတို့အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ cohabitate ဖို့ရှေးခယျြလိုအပ်သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့လူမှုရွေးချယ်မှုစမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဆုံးဖြတ်ကို 'မိတ်ဖက် preference ကိုစမ်းသပ်' (Williams က et al အဖြစ်ရည်ညွှန်း။ , 1992) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုများအတွက်အကြောင်းအရာသုံး Chambers ယန္တရားသို့နေရာချခြင်းနှင့်အခန်း (ပုံအကြောင်းကိုရွှေ့ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ပါသည် (Figure1B) .1B က) ။ အဆိုပါအကျွမ်းတဝင်အိမ်ထောင်ဖက် (မိတ်ဖက်) နှင့်တစ်ဦးကျွမ်းတဝင်မရှိသောအမျိုးသမီး (လူစိမ်း) (ပုံသီးခြားအိတ်များအတွက် tethering ဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုတိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်အစေခံ (Figure1B) .1B က) ။ ဘာသာရပ်များအစပိုင်းတွင် Williams က et al (ထိုအဖော်ဒါမှမဟုတ်လူစိမ်းဖြစ်စေဘေးမှာအိပ်ထို့နောက်ယန္တရားစူးစမ်းခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993) ။ ဘာသာရပ်များသူစိမ်းကျော်မိတ်ဖက်နှင့်အတူ side-by-side အဆက်အသွယ်သိသိသာသာပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းခဲ့လျှင် (ကအားဖြင့်အကဲဖြတ် t-test) ထို့နောက်အုပ်စုပါတနာတစ် preference ကို (Aragona နှင့်ဝမ်, ပြသရန်ဟု 2004; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005; လျူ et al ။ , 2001).
အတော်များများကလေ့လာမှုများအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles 24 များအတွက်အီစထိုဂျင်-ရစေတယ်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ မိတ်လိုက်၏ဇယုံကြည်စိတ်ချရသော Aragona et al (ဖက်ဦးစားပေးပြသ။ , 2003; Lim ကများနှင့်လူငယ်, 2004; လျူ et al ။ , 2001) (ပုံ (Figure1C) .1ကို C) ​​။ သို့သျောလညျးအထီးဘာသာရပ်များသာအမျိုးသမီးနှင့်အတူ cohabitate လျှင်6ဇမိတ်လိုက်ခြင်းမရှိဘဲ, ဘာသာရပ်များ Non-ရွေးချယ် side-by-side အဆက်အသွယ်ပြသရန်နှင့်အရှင်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး (Aragona နှင့်ဝမ်, ပြသရန်ပျက်ကွက် 2007; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005; လျူ et al ။ , 2001) (ပုံ (Figure1D) .1: D) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် '' 24 အသုံးချရန် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီးနိုင်လျှင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်ဆနျးစစျဖို့ဇမိတ်လိုက် '' ပါရာဒိုင်း။ ထို့အပြင်ငါတို့သည် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေး (ဝမ်နှင့် Aragona အဖော်ရှာ၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်နိုင်လျှင်ဆနျးစစျဖို့ '' 6-ဇတွဲပြီး '' ပါရာဒိုင်းကိုသုံးပါ 2004; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004).
တစ်ဖက် preference ကိုတစ်စုံနှောင်ကြိုးဘို့လိုအပ်နေချိန်မှာ, ကယင်း၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုတို့အတွက်လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး။ Pair ကိုကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားကိုလည်းမှထုတ်ပြန်သောအလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက် (Aragona et al ငြင်းပယ်ဖို့ရှေးခယျြ။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007) ။ ဤသည်ဝမ် et al ( 'ရွေးချယ်ကျူးကျော်' နှင့်ဘာသာရပ်ဝတ္ထု conspecifics နှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူနှင့်ထိတွေ့သောတစ်နေထိုင်သူ-ကျူးကျော်စမ်းသပ်သုံးပြီးဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာလေ့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် quantified ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993) ။ 24 နေစဉ် ရွေးချယ်ကျူးကျော် (ဝမ် et al မိတ်လိုက်တိုး၏ဇ။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993), ရန်လိုသည့်အပြုအမူဝတ္ထုအမျိုးသမီးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (အထီးကျူးကျော်သူတွေကဆီသို့ပိုပြီးတိုးပွါး) နှင့်အထီးဘာသာရပ်များ 24 အောက်ပါအမျိုးသမီးကျူးကျော်သူတွေကလိုက်သို့မဟုတ်ကိုက်ကြဘူး မိတ်လိုက်၏ဇ (ဝမ် et al ။ , 1997) ။ ပြောင်းပြန်အနေနဲ့တိုးချဲ့တွဲပြီး (2 အောက်ပါ အမျိုးသမီးကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖြစ်လာသည့်အတွက်ရက်သတ္တပတ်), အထီး Aragona et al (() ကျက်စားများနှင့်ကိုက်၏မြင့်မားဖေါ်ပြခြင်းဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်လာသည်။ , 2006; Gobrogge et al ။ , 2007) နှင့်မှထုတ်ပြန်သောအလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ငြင်းပယ်ရန်ဤဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးများ၏တည်ငြိမ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အရေးကြီးသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ထားတဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ monogamous လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး (1) ကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်မှအတိုင်းအတာအလားအလာငြင်းပယ်ဖို့တစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးသည် '' မိတ်ဖက် preference ကို '' နှင့် (2) နောက်ဆက်တွဲရှေးခယျြမှုနှင့်အတူသားကိုမွေးရန်ကနဦးရှေးခယျြမှုစဉ်းစားမည် အသစ်သောအိမ်ထောင်ဖက်, ရွေးချယ်ကျူးကျော်။ ဤအကောင်းမွန်စွာထူထောင်ဓာတ်ခွဲခန်းညွှန်းကိန်းရှိခြင်းသည်ဤအပြုအမူအခြေခံသည့် neurobiology ၏အသေးစိတ်စာမေးပွဲခွင့်ပြုပါတယ်။ pair တစုံဘွန်းသိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များတစ်များပြားလှကပါဝငျကြောင့်အာရုံကြောစနစ်များ၏ကျယ်ပြန့အပါအဝင်ယင်း၏စည်းမျဉ်းများအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ oxytocin (Bale et al, 2007; Bamshad et al ။ , 1993; Insel နှင့် Shapiro, 1992; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; Witt et al ။ , 1990), vasopressin (Bamshad et al ။ , 1994; ကြိုးပုခက်နှင့်လူငယ်တို့, 2005; Lim က et al ။ , 2004b; လျူ et al ။ , 2001; Winslow et al ။ , 1993), corticosterone (DeVries et al ။ , 1995, 1996; Lim က et al ။ , 2007), အီစထိုဂျင် (ကုရှနှင့် Wynn-Edwards က, 2006), အချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သား (Curtis နှင့်ဝမ်, 2005) ။ ပိုပြီးစမ်းသပ်ချက်ကောက်ယူနေကြသည်နီးပါးဘာမျှမကဤစနစ်များ pair တစုံဘွန်းထိန်းညှိဖို့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုလူသိများသည်အတိုင်းဤစာရင်းဆက်ဆက်ကြီးထွားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်အလုပ်တစ်ခုထူးခြားသောငွေပမာဏနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့မကြာသေးမီကအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Aragona နှင့်ဝမ်အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် mesolimbic DA ဂီယာ၏သိသာထင်ရှားသောပါဝင်ပတ်သက်မှုသရုပ်ပြလေ့လာမှုများတစ်စီးရီးကောက်ယူကြပါပြီ 2007; Aragona et al ။ , 2003, 2006).
နျူကလိယ Accumbens Dopamine နှင့် Pair ကိုဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်း
Pair ကိုနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး monogamous အိမ်ထောင်ဖက် (Aragona et al အကြားဖွဲ့စည်းခဲ့တစ်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ , 2006; ဝမ်နှင့် Aragona, 2004; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004) နှင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုသိသိသာသာ mesolimbic DA ဂီယာ (Di Chiara နှင့် Bassareo ဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် 2007; ကယ်လီ, 2004; ပညာရှိ 2004) ။ အထူးသဖြင့်, ထို NAc အတွင်း DA ဂီယာ, ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အရေးကြီးသောကဏ္ဍများ (Berridge နှင့်ရော်ဘင်ဆင်ဘို့အရေးကြီးသည် 2003; Everitt နှင့် Robbins, 2005; Roitman et al ။ , 2005, 2008; Salamone နှင့်ကော်ရဲရား, 2002; ဝီ et al ။ , 2008) ထိုကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ရွေးချယ်မှုအပြုအမူနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ (Phillips က et al မှဆက်စပ်လေ့လာဆန်းစစ်အခြေခံလိမ့်မည်။ , 2007) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ NAc (Aragona နှင့်ဝမ်အတွင်း DA ဂီယာအားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုစီးရီးကောက်ယူ, 2007; Aragona et al ။ , 2003, 2006).
သည်အခြားကြွက်မျိုးစိတ် (Jansson et al ဆင်တူ။ , 1999), မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole NAc ထူထပ်သည့် ventral midbrain (ပုံမှပေါ်ပေါက် dopaminergic ဆိပ်ကမ်းအားဖြင့် innervated ဖြစ်ပါတယ် (Figure2A) 2တစ်ဦးက) (Aragona et al ။ , 2003; Curtis နှင့်ဝမ်, 2005; Gobrogge et al ။ , 2007) ။ ဒါ့အပြင်ကြွက်များတွင်ကောက်ယူလေ့လာမှုများ (Becker က et al နှင့်ကိုက်ညီ။ , 2001; Pfaus et al ။ , 1995; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002), microdialysis အစီအမံမိတ်လိုက်အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Gingrich et al ၏ NAc အတွင်း extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြ။ , 2000) နှင့်တစ်ရှူးထုတ်ယူခြင်းလေ့လာမှုများမိတ်လိုက်လည်းအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် dopamine ဂီယာ (dopamine လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်အားဖြင့်ညွှန်ပြကဲ့သို့) (ပုံတိုးပွါးကြောင်းပြသ (Figure2B) 2B က) (Aragona et al ။ , 2003) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကမိတ်လိုက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်သုတ်ရည်ထိစဉ်အတွင်း NAc အတွင်း DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျိုးနွံတိုး evokes ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ Dopamine စည်းမျဉ်း. (က) လူကြီးအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ထံမှ dorsal နှင့် ventral striatum ၏ tyrosine hydroxylase immunocytochemical တံဆိပ်ကပ်ခြင်းမှု Coronal အပိုင်း။ က CP = caudate putamen, NAc = နျူကလိယ NAc shell ကို, ညီလေး = olfactory accumbens ...
ကျနော်တို့ Aragona et al (DA ဂီယာအတွက်မိတ်လိုက်-evoked တိုးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ကြောင်းတွေးဆ။ , 2003) ။ အဆိုပါ NAc အတွင်း DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ပုံမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးတားဆီးမယ်ဆိုရင်ဒီစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးဆန်းစစ် (Figure2C) .2ကို C) ​​။ ယခင်လေ့လာမှုများ (Williams က et al နှင့်ကိုက်ညီ။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993), ကြိုတင်မိတ်လိုက်နှင့်အတူ 24-ဇတွဲပြီးကာလ () ဖို့ NAc အတွင်းအတု cerebrospinal fluid (CSF) ၏ Micro-တာဟာလက်ခံရရှိကြောင်းထိန်းချုပ်မှုတိရိစ္ဆာန်များ (ပုံကြံ့ခိုင်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးပြသ (Figure2C) .2ကို C) ​​။ သို့သော်မိတ်လိုက်ကာလမှကြိုတင် non-ရွေးချယ် DA အဲဒီ receptor ရန် (haloperidol) နဲ့ DA receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း, မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖျက်သိမ်း (ပုံ (Figure2C) .2ကို C) ​​။ အရေးကြီးတာက, DA အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်းကိုတိုက်ရိုက်အဖော်ရှာစဉ်အတွင်း NAc အတွင်း DA ဂီယာ Aragona et al (အဖော်ရှာ၏အကျိုးဆက်ခဲ့ကြောင်းလူမှုရေးရွေးချယ်မှုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ညွှန်ပြ, locomotor လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်အပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ , 2003).
အဆိုပါ NAc အတွင်း DA receptors ၏ pharmacological activation Aragona et al (အဖော်ရှာ၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့လာမယ့်စမ်းသပ်စစ်ဆေး။ , 2003) ။ အဖြစ်ယခင်က (Williams က et al ဖော်ပြခဲ့သည်။ , 1992; Winslow et al ။ , 1993), မတိုင်မီ 6-ဇတွဲပြီးကာလဖို့ NAc သို့ CSF တာဟာလက်ခံရရှိကြောင်းထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များဖက်ဦးစားပေး (ပုံမပြခဲ့ဘူး (Figure2D) .2: D) ။ apomorphine မြင့်မားထိုးပြုတ်ရည် (ပုံမသော်လည်းသို့သော် non-ရွေးချယ် DA agonist (apomorphine) ၏အနိမ့်ထိုးပြုတ်ရည်တစ်သိသိသာသာမိတ်ဖက် preference ကိုသွေးဆောင် (Figure2D) .2: D) ။ ဤရွေ့ကားအချက်အလက်များကို NAc အတွင်း DA receptors ၏ pharmacological activation အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်များ၏ရွေးချယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လုံလောက်သောကြောင်းပြသပါ။
အဆိုပါ NAc ရှဲလ်အတွက် D1 နှင့် D2 receptor signal Pathways အားဖြင့် Pair ကိုဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆန့်ကျင်စည်းမျဉ်းဥပဒေ
အနိမ့်ထိုး apomorphine အားဖြင့်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏နည်းပြကဒီအပြုအမူ၏ DA စည်းမျဉ်းအခြေခံကအဲဒီ receptor တိကျတဲ့ယန္တရား၏ညွှန်ပြဖြစ်ပါသည်။ Neve et al ((D1, D1 နှင့် D5 receptors) (D2 နှင့် D2 receptors) D3 တူသောနှင့် D4-ကဲ့သို့: ရှိပါသည် DA receptors ၏မိသားစုနှစ်စုဖြစ်ကြသည်။ 2004) ။ apomorphine D1 နှင့် D2 ကဲ့သို့နှစ်ဦးစလုံး receptors ချည်နှောင်နေစဉ်, ကအများကြီး သာ. ကွီးမွတျဆှဖှေဲ့ (Missale et al နှင့်အတူ D2 ကဲ့သို့ receptors ချည်နှောင်။ , 1998) ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အနိမ့်ထိုး apomorphine ဦးစား activated ကြောင်း D2- တွေးဆဒါပေမယ့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် D1-mediated ယန္တရားကနေတဆင့် D2 ကဲ့သို့မဟုတ် receptors ထို့ကြောင့်သွေးဆောင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း (Aragona et al ။ , 2006) ။ ထို့အပြင်ဖက်ဦးစားပေးလုပ်ရန်ဆွဲဆောင်လေ့မြင့်ထိုး apomorphine ၏ကျရှုံးခြင်းဟာ NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation အမှန်တကယ် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤရွေ့ကားယူဆချက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဆနျးစစျဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ခုထူထောင် Paradigm အပေါ်အဲဒီ receptor တိကျတဲ့ dopaminergic မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်နေဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (Gingrich et al ကနေဒေတာတွေကိုနှင့်ကိုက်ညီ။ , 2000; ဝမ် et al ။ , 1999), မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက် NAc shell ကိုအတွင်း D2 ကဲ့သို့ receptors (သို့သော်မ NAc core ကို) သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး၏တိကျသော activation (ပုံ (Figure3A) .3တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါ NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation မသာ Shell ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက်, ဒါပေမယ့်လည်း D2 ကဲ့သို့ activation အားဖြင့်သွေးဆောင်တားဆီးဖက်ဦးစားပေး (ဆိုလိုသည်မှာ D1 နှင့် D2 agonists ပူးတွဲထုံမွှန်းခဲ့ကြသည့်အခါ) (ပုံ (Figure3A) .3တစ်ဦးက) ။ အရေးကြီးတာက, အ NAc shell ကိုအတွင်း D1 ကဲ့သို့ activation လည်းမိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (ပုံကိုပိတ်ဆို့ထား (Figure3B) .3B က) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာကိုသရုပ်ပြအဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation ဖက်ဦးစားပေး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်း D2- နှင့် D1 ကဲ့သို့ dopamine အချက်ပြစနစ်များအားဖြင့်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ဆန့်ကျင်စည်းမျဉ်း. (က) အဆိုပါ D2-တိကျတဲ့ agonist quinpirole ၏ Micro-ပြုတ်ရည်အားဖြင့် NAc shell ကိုအတွင်း D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation (D2 လွန်ခဲ့တဲ့) သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး ...
D1 နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors (Neve et al အချက်ပြစခန်းကျော်ဆန့်ကျင်ဘက်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ , 2004) ။ D2 ကဲ့သို့ receptors adenyl cyclase (Missale et al နေဖြင့်စခန်းမှ ATP ကပြောင်းလဲခြင်းကိုတားဆီးပေးသော inhibitory, G-ပရိုတိန်းကိုသက်ဝင်။ , 1998) ။ ပြောင်းပြန် D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation စခန်းထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) (Missale et al ၏အရှင် activation တိုးပွါးပေးသော stimulatory, G-ပရိုတိန်းမြှင့်လုပ်ဆောင်။ , 1998) ။ တိုးမြှင့်စခန်းထုတ်လုပ်မှု PKA ချည်နှောင်တဲ့စခန်း analogue သုံးပြီးအကဲဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်သော်လည်းစခန်းထုတ်လုပ်မှုတစ်စခန်း analogue (RP-Camp) ကို အသုံးပြု. PKA အပေါ်ဆိုဒ်များ binding စခန်း၏ pharmacological ပိတ်ဆို့ထားခြင်းအားဖြင့်လေ့လာခဲ့နိုင်ပါတယ်လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်ထုတ်ယင်း၏စည်းမျဉ်း subunits (SP-Camp) (Lynch နှင့် တေလာ, 2005; ကိုယ်ပိုင် et al ။ , 1998).
အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်း D2 ကဲ့သို့ activation မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း mediates ကြောင်းပေးထားကျနော်တို့လျှော့ PKA လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဒီအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့တွေးဆ။ (RP-Camp သုံးပြီး) PKA များ၏လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျလာ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၏ D2 စည်းမျဉ်း, မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေး (ပုံနှင့်ကိုက်ညီ (Figure3C) .3ကို C) ​​။ ပြောင်းပြန်, (SP-Camp သုံးပြီး) PKA ၏တိုးပွားလာ activation ဖက်ဦးစားပေးသွေးဆောင်ရန်ပျက်ကွက် (ပုံ (Figure3C) .3ကို C) ​​။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း PKA လှုပ်ရှားမှုမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (ပုံပြောင်းလဲပစ်ဘူးလျော့နည်းသွား (Figure3D) .3: D) ။ သို့သော်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး D1 ကဲ့သို့ activation နှင့်အတူတသမတ်တည်း, PKA ၏တိုးမြှင့် activation (ပုံမိတ်လိုက်-သွေးဆောင် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး (Figure3D) .3: D) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာကြောင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး D2 ကဲ့သို့ activation နှင့်စခန်း-အချက်ပြလမ်းကြောင်း၏နောက်ဆက်တွဲလျော့နည်းသွားလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြသည်။ ပြောင်းပြန် D1 ကဲ့သို့ activation နှင့် PKA ၏နောက်ဆက်တွဲတိုးမြှင့် activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းတားဆီး။
up-Regulation Pair ကို Bond တိရစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွင်း D1-လိုပဲ DA receptor ၏
လိင်ကနုံအနေဖြင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အကူးအပြောင်းအပြည့်အဝကပ်လျက်တည်ရှိ pair တစုံအဖြစ်အံ့သြဖွယ်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲ Carter က et al (ရှိပါသည်။ , 1995) ။ တွဲကပ်လျက်တည်ရှိအထီးဝတ္ထုအမျိုးသမီးကိုရှောင်ရှားသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်သော်လည်းအထူးသလိင်နုံယောက်ျားအဓိကအား, ဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့လိုလားသူလူမှုရေးအပြုအမူတွေပြသပါ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် NAc အတွင်း DA ဂီယာ၏သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍပေးထားကျနော်တို့ကဒီ DA အချက်ပြစနစ်ကိုပြောင်းလဲ pair တစုံဘွန်း (Aragona et al နှင့်ဆက်စပ်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့မျှော်လင့်ထား။ , 2006) ။ ကျနော်တို့2များအတွက်အမျိုးသမီးနှင့်အတူတွဲခဲ့လိင်နုံအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှင့်ယောက်ျားပေါင်းအကြား DA အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အဲဒီ receptor autoradiography ကိုအသုံးပြု ရက်သတ္တပတ်။ ဒီတိုးချဲ့တွဲပြီးယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းစဉ်အတွင်းငှက်သိုက် shared နှင့်အမျိုးသမီး Aragona et al (ကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်လာခဲ့သည်။ , 2006) ။ အဲဒီ receptor ၏ကိုယ်စားလှယ်ဥပမာရှင်းလင်းစွာ D1 ကဲ့သို့ receptors (ပုံကွောငျးတငျပွ binding (Figure4A) 4A) ကိုသော်လည်းမ D2 ကဲ့သို့ receptors (ပုံ (Figure4B) 4B) မှသိသိသာသာ pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက် NAc အတွင်းတိုးမြှင့်နေကြသည်။ quantitative data တွေကိုပုံ (binding D1 တူသောအဲဒီ receptor သိသိသာသာမှေးခငျြး-တွဲထိန်းချုပ်မှု၏နှိုင်းယှဉ် pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားအတွက် NAc အတွင်းတိုးမြှင့်ခဲ့ကွောငျးကိုပြသ (Figure4C) .4ကို C) ​​။ တစ်ဦးကသီးခြားထိန်းချုပ်အုပ်စုသည်တစ်ဦးတည်းအဖော်ရှာ (Aragona et al binding D1 တူသောအဲဒီ receptor တိုးမြှင့်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့်တစ်စုံကပ်လျက်တည်ရှိတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc အတွင်းတစ်တိုးမြှင် D1 တူသောအချက်ပြစနစ်ကရှိသည်နှင့်ဤစနစ်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းမှရန်ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကဒီအာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်း pair တစုံနှောင်ကြိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်လျှင်, ငါတို့သည်နောက်လာမည့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
up-စည်းမျဉ်း pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏. (က) ကိုယ်စားလှယ် dorsal အတွင်း binding D1 တူသောအဲဒီ receptor နှင့်လိင်နုံအရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ ventral striatum ၏ဥပမာ (လက်ဝဲ) နှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးတွဲ (နှင့်အတူတွဲ ...
အဆိုပါ NAc underlying Pair ကိုဘွန်းကို Maintenance အတွင်းအာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်း
ဒီအာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်းတိုးချဲ့ကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ပါတယ်လျှင်တစ်စုံကပ်လျက်တည်ရှိပေးထားတိရိစ္ဆာန်များအတွက် NAc အတွင်း D1 တူသောအဲဒီ receptor စကားရပ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့ကျူးကျော်များ၏မြင့်မားကိုပြသကြပါပြီ, ကျွန်တော်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့ကို up-စည်းမျဉ်းကတော့ NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ဆိုလိုသည်မှာရွေးချယ်ကျူးကျော် (Gobrogge et al, အလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်၏ရန်လိုငြင်းပယ်ခံရ mediates လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်နေထိုင်သူတစ်ဦး-ကျူးကျော်စမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ , 2007; ဝမ် et al ။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993) ။ ဒီစမ်းသပ်မှုမှာအမျိုးသမီးအဖော်အိမ်လှောင်အိမ်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံး Affiliate (ပုံကနေဖယ်ရှားခဲ့သည် (Figure5A) 5တစ်ဦးက) နှင့်ရန်လို (ပုံ (Figure5B) 5ခ) အထီးဘာသာရပ်၏အပြုအမူတစ်ခု '' ကျူးကျော် '' အမျိုးသမီး (ဝမ် et al ၏နိဒါန်းတွင်အောက်ပါလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ , 1997; Winslow et al ။ , 1993) ။ Pair ကိုကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားတစ်ဦးဝတ္ထုအမျိုးသမီး (ပုံနှင့်အတူတင်ပြလိင်နုံအထီးများကပြသကြောင်းနှိုင်းယှဉ်သူတို့ရဲ့အကျွမ်းတဝင်မိတ်ဖက်ဆီသို့ Affiliate အပြုအမူများသိသိသာသာမြင့်မားတဲ့အဆင့်ဆင့်ပြသ (Figure5C) .5ကို C) ​​။ pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီး (ပုံဝတ္ထုအမျိုးသမီး (သူစိမ်း) ဆီသို့နီးပါးမျှ Affiliate အပြုအမူကိုပြသနေစဉ် (Figure5C), 5D2 သို့မဟုတ် D1 ကဲ့သို့ဖြစ်စေ receptors အဆိုပါ NAc (ပုံအတွင်းပိတ်ဆို့ခံခဲ့ရလျှင်, C), Affiliate အပြုအမူလိင်နုံဘာသာရပ်များအားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဆင့်ဆင့်မှပြန်လာသောဖြစ်ပါတယ် (Figure55ခ)
ဝတ္ထုအမျိုးသမီးဆီသို့ရွေးချယ်ကျူးကျော်ခြင်းဖြင့်ညွှန်ပြအဖြစ် pair တစုံနှောင်ကြိုးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ Dopamine စည်းမျဉ်း. (က) Affiliate အပြုအမူအတွက်စေ့စပ် pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအိမ်ထောင်ဖက်၏ဓာတ်ပုံ (ပုံမှန်အား huddling သို့မဟုတ် side-by-side အဆက်အသွယ်) ။ (ခ) Pair ကိုကပ်လျက်တည်ရှိအထီး (ညာ) ရန်လိုခြင်း ...
ကိုမလိင်သူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့ဝတ္ထုအမျိုးသမီးမဟုတ်သလို pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားနဲ့အတူတင်ဆက်နုံအထီးရန်လိုသည့်အပြုအမူပြသ (ပုံ (Figure5D) .5: D) ။ သို့သော်တစ်စုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီးဝတ္ထုအမျိုးသမီး (သူစိမ်း) နဲ့တင်ဆက်သောအခါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ခဲ့ကြသည်တိုက်ခိုက်မှုများ၏နံပါတ်များကိုတစ်ဦးသိသိသာသာတိုးဖေါ်ပြခြင်း (ပုံ (Figure5D) .5: D) ။ ရန်လိုသည့်အပြုအမူအတွက် NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ (သို့သော် D2 ကဲ့သို့မဟုတ်) receptors ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း (ပုံအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရ (Figure5D) .5: D) ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုပုံ (D1 ကဲ့သို့ receptors တွေရဲ့တက်-စည်းမျဉ်းအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ကြောင်းပြသ (Figure4) 4) ရွေးချယ်ကျူးကျော် mediates ။ ထို့ကြောင့် mesolimbic DA သည့်စနစ်အတွင်း plasticity အလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ငြင်းပယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်အခြေခံနှင့်အရှင်ကနဦး pair တစုံနှောင်ကြိုးထိန်းသိမ်းထားသည်။
Pair ကိုဘွန်းဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ Maintenance ကျော် Dopamine စည်းမျဉ်းဥပဒေများ၏အနှစ်ချုပ်
pair တစုံဘွန်း၏ Mesolimbic DA စည်းမျဉ်းလူမှုရေးရွေးချယ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သိမြင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအဘို့သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း mediates ကြောင်း DA ဂီယာ Aragona et al (အထူး NAc shell ကို၏ rostral သောအဘို့ကိုအတွင်းတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ , 2006) (ပုံ (Figure6A) .6တစ်ဦးက) ။ ဤသည် Sub-ဒေသအပြုသဘော processing များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှု (Di Chiara နှင့် Bassareo ၏ခြွင်းချက်မရှိရှုထောင့် 2007; Ikemoto, 2007; Pecina et al ။ , 2006) ။ ထို့ကြောင့် NAc shell ကိုအတွင်း DA ဂီယာတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု (Berridge, မှတစ်ဆင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းထိန်းညှိစေခြင်းငှါ 2007; di Chiara နှင့် Bassareo, 2007) ။ ထို့အပြင်အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်း DA ဂီယာဟာမွေးရာပါဆုလာဘ်လူမှုရေးပူးတွဲမှု (ရှန်ပိန် et al ဖြစ်သောမိခင်-အမျိုးအနွယ်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်, အတွက်လည်းအရေးပါသည်။ , 2004; လီများနှင့် Fleming က, 2003; Numan et al ။ , 2005) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါ NAc အတွင်း dopamine ဂီယာအားဖြင့်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ differential စည်းမျဉ်း. (က) ကာတွန်း (Arbuthnott နှင့် Wickens အပေါ်အခြေခံပြီး, 2007) ရှိရာ DA ထိန်းသိမ်းရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအတွက် NAc shell ကို၏အဘို့ဖေါ်ပြခြင်း။ (ခ) ပုံ ...
အဆိုပါ NAc shell ကိုအတွင်းမှာပဲမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ DA စည်းမျဉ်းအလွန်အမင်းတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်လိုက်-သွေးဆောင် DA လွှတ်ပေးရန်ရွေးချယ် D2 ကဲ့သို့ receptors မြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (ပုံမြှင့်တင်ရန်စခန်းအချက်ပြလျော့ကျ (Figure6B) .6B က) ။ ပြောင်းပြန် D1 ကဲ့သို့ receptors နှင့်စခန်းအချက်ပြ၏တိုးမြှင့် activation ၏ activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီး (ပုံ (Figure6C) .6ကို C) ​​။ ဤရွေ့ကားဒေတာကြောင့်ဆက်ဆက်ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေ (Schultz အောက်ဖြစ်သကဲ့သို့သဘာဝအခွအေနမြေားအောကျ, DA ဂီယာတစ်ပုံစံတည်းတိုးလာသည်မဟုတ်, ထိုညွှန်ပြ 2002) ။ ယင်းအစားအဆိုပါစုံတွဲကို Bond လေ့လာမှုများမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေး interaction က Richfield et အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D2 ကဲ့သို့ receptors (အယ်လ်ကိုသက်ဝင်မဟုတ်စဉ်ရွေးချယ်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ D1 ကဲ့သို့ receptors ကိုသက်ဝင်သည်ဟု extracellular DA အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျိုးနွံတိုးမှုကြောင့်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 1989) ။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများကို real-time DA ဂီယာ (Aragona et al တိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်ဒီစမ်းသပ်ဖို့အတှကျသို့ရာတွင်ထိုသို့လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ , 2008; နေ့ et al ။ , 2007; Phillips က et al ။ , 2003) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လူမှုရေး interaction ကနေစဉ်အတွင်းလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန် Vivo အတွက် DA ဂီယာဤသုံးသပ်ချက်ကိုမှာဖော်ပြထားတဲ့အမူအကျင့်ဆေးဝါးဗေဒတွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။
သူတို့ရဲ့ Basal ပြည်နယ် (ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (Figure6D), 6: D), pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီး NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏မျက်နှာပြင်စကားရပ် (ပုံထဲမှာအားကောင်းတဲ့တိုးပြသ (Figure6E) .6အီး) ။ ငါတို့သည်ဤ pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (Aragona et al မြှင့်တင်ရန်ကြောင်းလူမှုရေး interaction ကနေစဉ်အတွင်းမရှိခြင်း D1 တူသောအဲဒီ receptor activation အောက်ပါတစ်ဦးအစားထိုးတိုးဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုခဲ့ကြ။ , 2006) ။ pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိအထီး NAc အတွင်း D1 ကဲ့သို့ receptors တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းကိုပြသနှင့်ဤ receptors ၏ activation pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးကျနော်တို့ကသူတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တစ်စုံကပ်လျက်တည်ရှိယောက်ျားတစ်ဦးဝတ္ထုအမျိုးသမီးကြုံတွေ့ရသောအခါ, DA အလွန်မြင့်မားအတွက်ဖြန့်ချိကြောင်းအကြံပြုခဲ့ကြပြီးကတည်းက အာရုံစူးစိုက်မှု (ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002) Richfield et အနိမ့်ဆှဖှေဲ့ D1 ကဲ့သို့ receptors (အယ်လ်ကိုသက်ဝင်ဖို့လုံလောက်သော။ , 1989), pair တစုံကပ်လျက်တည်ရှိ voles အတွက်ရန် D1 ကဲ့သို့ receptors ၏ကြီးမြတ်သောအရေအတွက်ကိုဖြစ်အဲဒီမှာပေါ်လာအထူးသဖြင့်ကတည်းက။ ဒါကအလားအလာသစ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်၏ရန်လိုငြင်းပယ်ခံရအားပေးအားမြှောက်နှင့်အရှင်ကနဦး pair တစုံနှောင်ကြိုးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတစ်ခုကြော့ယန္တရားကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤအချက်အလက်များကို NAc နှင့်အတူ DA ဂီယာ differential ကနဦးမိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အလားအလာဝတ္ထုအိမ်ထောင်ဖက်၏နောက်ဆက်တွဲငြင်းပယ်ခံရ mediates ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဒီ mesolimbic DA အချက်ပြစနစ်အတွင်းကအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် neuroplasticity အားဖြင့် (တက်-စည်းမျဉ်း D1 ကဲ့သို့ receptors ၏), အောင်မြင်နေသည်။ ဒါကရှုပ်ထွေး monogamous လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကသိသိသာသာ mesolimbic DA အချက်ပြခြင်းဖြင့်စိတ်ခံစားမှု / ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကကမကထပြုခဲ့နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြောင်းနှစ်ခုမဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေကတာဝန်ယူနိုင်သည့်အတွက်အစွမ်းထက်ဥပမာကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
Dopamine-oxytocin ဆက်သွယ်မှုသည်နှင့် Partner ဦးစားပေးမှုဖွဲ့စည်းခြင်း
pair တစုံဘွန်းအတွက် DA ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုနေသော်လည်း DA Lim က et al (ဒီအပြုအမူဟာသူ့ရဲ့စည်းမျဉ်းထဲမှာမျိုးစုံ neuropeptide စနစ်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်။ , 2004b, 2007; ငယ်ရွယ်ပြီးဝမ်, 2004) ။ အထူးသဖြင့်, ထို NAc အတွင်း oxytocin receptors နှင့်အတူ DA interaction က pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်း (လျူနှင့်ဝမ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောများမှာ 2003) ။ အဆိုပါ NAc အတွင်း D2 ကဲ့သို့ receptors ၏ activation မိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်, သို့သော်, (တစ်ဦး oxytocin အဲဒီ receptor ရန်နှင့် D2 တူသောအဲဒီ receptor agonist ၏ Co-ပြုတ်ရည်များက) ဤဒေသအတွင်း oxytocin receptors ၏ပိတ်ဆို့သွေးဆောင်ဖက်ဦးစားပေးကာကွယ်ပေးသည် D2 activation (လျူနှင့်ဝမ်က 2003) ။ D2 ကဲ့သို့ receptors ပိတ်ဆို့ထားသည်ဆိုပါကနောက်ထပ်, oxytocin receptors ၏ activation အားဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း၏ပံ့ပိုး, လျူနှင့်ဝမ် (ထိရောက်သောမဟုတ်ပါဘူး 2003) ။ အရေးကြီးတာက, ဒီလေ့လာမှုအမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (လျူနှင့်ဝမ်အတွက်ကောက်ယူခဲ့သည် 2003), သို့သော်ကျနော်တို့ကိုလည်း NAc အတွင်း oxytocin receptors အထီး (အမ် Smeltzer နှင့် Z. ဝမ်, အတည်မပြုရသေးသောလေ့လာတွေ့ရှိချက်) တွင်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ DA-oxytocin interaction က၏ယန္တရားမသိနိုင်ပါဘူးနေစဉ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် dopaminergic ဆိပ်ကမ်း၏ရွေးချယ်တွေ့ရှိရပါသည် Lim က et al (ထို NAc အတွင်း oxytocin အဲဒီ receptor စကားရပ်ကိုလျှော့ချခဲ့ပါဘူး။ , 2004a) ။ ဒီဒေသအတွက် oxytocin receptors Post-Synaptic ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင် oxytocin နှင့် D2 ကဲ့သို့ receptors ကတည်းကနှစ်ဦးစလုံး inhibitory, G-ပရိုတိန်းအချက်ပြမော်လီကျူး (ဘန်း et al မှ coupled နေကြသည်။ , 2001), receptors နှစ်ခုစလုံးအမျိုးအစားများကို Activation စခန်းအချက်ပြလမ်းကြောင်း (Aragona နှင့်ဝမ်၏တားစီးနေဖြင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းငှါ 2007) ။ လက်ရှိဒေတာအကြံပြုစဉ်တွင်ကြောင်း pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေး oxytocin နှင့် D2 ကဲ့သို့ DA receptors (Gingrich et al နှစ်ဦးစလုံး၏ပူးတွဲ activation ကကမကထပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ , 2000; လျူနှင့်ဝမ်, 2003; လူငယ်တို့ et al ။ , 2001), ဒါကြောင့်သူတို့က NAc အတွင်း-တည်ရှိပူးတွဲကြောင်းအပြိုင်စနစ်များကိုကိုယ်စားပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများ DA နှင့် oxytocin အဲဒီ receptor စနစ်များကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ဆံလျှင်နားလည်ပြီး, ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ထို interaction ကအတူတူသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ဆဲလ်အပေါ်ပေါ်ပေါက်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ သို့သော်နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ pair တစုံဘွန်းများအတွက်အရေးပါသောအချက်ပြစနစ်များနှင့်အတူ DA interaction ကနားလည်ရန်လိုအပ်သော်လည်း (ဥပမာ ventral pallidum အတွင်း vasopressin အဖြစ် NAc ၏အပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိနေကြသည်; Lim က et al ။ 2004b).
Prairie Voles နှင့်လူသားများအတွက်လူမှုဆုကြေး၏ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောစည်းမျဉ်းဥပဒေများအကြားနှိုင်းယှဉ်
စိတ်ဝင်စားစရာလူသားများအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းလည်း Fisher က et al (DA အချက်ပြစနစ်များပါဝင်သည်။ , 2005) ။ အထူးသဖြင့်မိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏ရုပ်ပုံကိုတင်ပြခြင်းသည် dopaminergic ဆားကစ်ကိုလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည် (Aron et al ။ , 2005; Zald et al ။ , 2004) ။ ထို့ကြောင့်လူသားများအတွက်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှု (Fisher က et al မူလတန်းစိတ်ခွန်အားနိုးသို့မဟုတ်ကြိုးဖြစ်စဉ်များပါဝင်လိမ့်မည်။ , 2005) မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာသူတို့နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြောင်း။ ထိုကဲ့သို့သောအမျှမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏အာရုံကြောအခြေခံလူသားများတွင်အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုကိုဤရှုထောင့်များအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မော်ဒယ်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထို့အပြင်ဤတွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ neurobiology နားလည်သဘောပေါက်လူမှုရေးရွေးချယ်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ Loewenstein et al (များ၏ neurobiology ကိုနားလည်ဘို့အရေးပါကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ , 2008; Sanfey, 2007; Zak, 2004) ။ အမှန်မှာကလိုလားတဲ့လူမှုအပြုအမူတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့စိတ်ခံစားမှု (Harbaugh et al လွယ်ကူချောမွေ့အသုံးပြုပုံသမဝါယမအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ကြောင်းဆုလာဘ် circuitry ၏ activation ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်စေခြင်းငှါအကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ , 2007), Rilling et al (ယုံကြည်မှု၏ခံစားချက်များကိုအပါအဝင်။ , 2002).
Trust မှလူ့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများ Zak et al (voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ NAc စည်းမျဉ်း, oxytocin များအတွက်အရေးပါတဦးတည်း neuropeptide လူသားများအတွက်ယုံကြည်မှုအပြုအမူများအတွက်အရေးပါကြောင်းပြသကြ။ , 2004) ။ oxytocin ၏ယုံကြည်မှုအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်မှုအားယုံကြည်မှုဂိမ်းတစ်ခုဖြင့်ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်ကစားသမားတစ် ဦး သည်ဒုတိယမြောက်ကစားသမားအားငွေမပေးသည်ဖြစ်စေရွေးချယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ 'ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ' သည်ဒုတိယကစားသမားအားငွေပေးလျှင်ကစားပွဲတွင်ငွေပမာဏတိုးပွားလာပြီး 'ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ' ကဒုတိယကစားသမားအလှည့်တွင်ဒုတိယကစားသမားသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်စေပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအားမူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်ငွေထက်ပိုပြီးပြန်ပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည် (Kosfeld et al ။ , 2005) ။ ရိုးရှင်းစွာငွေအားလုံးထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအနေဖြင့်ဒုတိယကစားသမားရပ်တန့်ဖို့ဘာမှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအတရုံးတင်စစ်ဆေးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဒုတိယကစားသမားအပြန်အလှန်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရန်ပထမဦးဆုံးကစားသမားများအတွက်သိသာထင်ရှားသောကုန်ကျစရိတ်လည်းမရှိ။ စိတ်ဝင်စားစရာ oxytocin ၏အချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှာခေါင်းအုပ်ချုပ်ရေးယုံကြည်မှုနှင့်ဆက်နွယ်အန္တရာယ်ကိုကျော်လွှားရန် '' ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ '' များ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် '' ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက 'ဒုတိယကစားသမား (Kosfeld et al မှပေးသောပိုက်ဆံပမာဏကိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ , 2005) ။ ထို့ကြောင့်, oxytocin လူသားများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles နှစ်ဦးစလုံးအတွက်လိုလားတဲ့လူမှုအပြုအမူအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာသည်။
လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်လူသားများနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိုလားတဲ့လူမှုအပြုအမူအခြေခံသည့် neurobiology အကြားအချို့ဒီကဗျာတူညီအလေးပေးဖော်ပြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအမျှမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်လူ့ဘာသာရပ်များတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ကြောင်းပိုပြီးထိုးဖောက်နည်းလမ်းလူမှုရေးရွေးချယ်မှုများ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်အစွမ်းထက် tool ကိုဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole လယ်ပြင်က၎င်း၏နို့စို့အရွယ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ဒီမျိုးစိတ်သုံးပြီးစမ်းသပ်ချက်ရှင်းလင်းစွာ mesolimbic DA ဂီယာလူမှုရေးရွေးချယ်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ လူသားမြားသညျမကြာခဏခိုင်မာတဲ့လူမှုရေးဦးစားပေးပြသဘာဖြစ်လို့ဒီစနစ်ဆုလာဘ်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့၏ရှုထောင့် mediates ကြောင်းပေးထားလူသားများအကြားလူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရှင်းပြစေခြင်းငှါထက်အမြဲစင်ကြယ်သော Self-နှင့် ပတ်သက်. (Camerer နှင့် Fehr, ထဲကသရုပ်ဆောင် 2006; Fehr နှင့် Camerer, 2007; Sanfey, 2007) ။ လူမှုရေး neuroeconomics တိုးတက်လာ၏လယ်ပြင်ကြောင့်လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချအကောင်းဆုံးကတဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ထက်ပိုမိုပါဝငျသညျဤသို့ပိုမိုခေတ်မီသင်ယူမှု alorithms (Lee ကလိုအပ်သောကြောင့်ရှုပ်ထွေးကြောင်းဆင်ခြင်တုံတရားဆုံးဖြတ်ချက်ချအဖြစ် conceptualized ဖြစ်ပါတယ်ရှိမရှိစဉ်းစားရန်ဆက်လက် 2008), သို့မဟုတ်ပါကလူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချအဖြစ်အကြီးအကျယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုလူမှုရေးလှုံ့ဆျောမှုနှင့် hedonic အပြောင်းအလဲနဲ့ (Sanfey et al အားဖြင့်ပဲ့ထိန်းမှတ်ပိုပြီးအချက်အလက်ပါလျှင်။ , 2003; Skuse နှင့် Gallagher, 2009) ။ လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချဆက်ဆက်ဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုအပြောင်းအလဲနဲ့နှစ်ဦးစလုံးကပါဝင်ပတ်သက်နေစဉ်, မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်ကနေဒေတာတွေကိုရှုပ်ထွေးပြီးလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကသိသိသာသာဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်ဘဲရိုးရှင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအပြုအမူတွေတစ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်အားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ပါသည်ဘယ်လိုသရုပ်ပြပါ။ ဤသည်ရွေးချယ်ရေးသူတို့၏အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှု (Cabanac et al နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ဖွယ်ရှိအပျော်အပါးသို့မဟုတ်မျက်၏ဒီဂရီနှင့်အညီသရုပ်ဆောင်နေဖြင့်ရှုပ်ထွေးပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆက်ဆံသောသက်ရှိမျက်နှာသာသောအမြင်ထောက်ခံပါတယ်။ , 2009) ။ ဦးနှောက်ယုတ္တိဗေဒနှင့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအထင်ကြီးစွမ်းရည်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပေါ်လာနေချိန်မှာထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးအဖြစ်အလွန်ရှုပ်ထွေးသောဖြစ်စဉ်များ, ကိုလည်းစေ့စ့စပ်စပ် hedonic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့အားဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါစာရေးဆရာလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖတ်နေဘို့ဓါတ်ပုံနဲ့ Jeremy အိပ်ချ်နေ့အဘို့အ Shanna အယ်လ် Harkey, ယောရှုအယ်လ်ဂျုံးစ်နှင့် Bobby ဒဗလျူ Pastrami ကျေးဇူးတင်ဖို့အလိုရှိ၏။ ဤလုပ်ငန်းကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes ZXW မှ MHR01-58616, DAR01-19627 နှင့် DAK02-23048 ပေးအပ်ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Aragona BJ, Cleaveland NA, Stuber GD, နေ့ JJ, Carelli RM, Wightman RM (2008) ။ နျူကလီးယပ်အတွင်း dopamine ဂီယာ၏ဦးစားပေးတိုးမြှင့်ကင်းများက shell ကို phasic dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်တိုက်ရိုက်တိုးဖို့ attribute ဖြစ်ပါတယ် accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 28, 8821-883110.1523 / JNEUROSCI.2225-08.2008 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aragona BJ, လျူ Y. , Curtis JT, Stephan FK, ဝမ် Z. (2003) ။ နျူကလိယဘို့တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်-preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက် dopamine accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 23, 3483-3490 [PubMed]
Aragona BJ, လျူ Y. , ယု YJ, Curtis JT, Detwiler JM, Insel TR, ဝမ် Z. (2006) ။ နျူကလိယ dopamine differential monogamous pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု mediates accumbens ။ နတ်။ neuroscience ။ 9, 133-13910.1038 / nn1613 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aragona BJ, ဝမ် Z. (2004) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းအပေါ်အပြုအမူ neuroendocrine သုတေသနတစ်ခုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်။ ILAR ဂျေ 45, 35-45 [PubMed]
Aragona BJ, ဝမ် Z. (2007) ။ နျူကလီးယပ်အတွင်းစခန်းအချက်ပြခြင်းဖြင့် pair တစုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းစည်းမျဉ်းဆန့်ကျင် shell ကို accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 27, 13352-1335610.1523 / JNEUROSCI.3216-07.2007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Arbuthnott GW, Wickens ဂျေ (2007) ။ အာကာသ, အချိန်နှင့် dopamine ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 30, 62-6910.1016 / j.tins.2006.12.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Aron အေ, Fisher ကအိပ်ချ်, Mashek DJ သမား, ခိုင်ခံ့ G. အလီအိပ်ချ်, Brown က ll (2005) ။ အစောပိုင်းအဆင့်ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာမေတ္တာနှင့်ဆက်စပ်ဆုလာဘ်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစနစ်များကို။ ဂျေ Neurophysiol ။ 94, 327-33710.1152 / jn.00838.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bale KL, Plotsky pm တွင်, Young က LJ, Lim က MM, Grotte N. , Ferrer အီး, Carter က CS (2007) ။ မွေးကင်းစကလေး oxytocin ထိန်းသိမ်းရေး vasopressin receptors အပေါ်ကြာရှည်, လိင် dimorphic သက်ရောက်မှုရှိသည်။ neuroscience 144, 38-4510.1016 / j.neuroscience.2006.09.009 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bamshad အမ်, Novak MA, က de Vries GJ (1993) ။ လိင်နုံများနှင့်မိဘ၏မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ၏ vasopressin innervation အတွက်လိင်နှင့်မျိုးစိတ်ကွဲပြားမှု, Microtus ochrogaster နှင့် voles, Microtus pennsylvanicus Meadows ။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 5, 247-25510.1111 / j.1365-2826.1993.tb00480.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Bamshad အမ်, Novak MA, က de Vries GJ (1994) ။ တွဲပြီး (မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် vasopressin innervation နှင့်အဖေဘက်ကအမူအကျင့်ပွောငျးလဲMicrotus ochrogaster) ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 56, 751-75810.1016 / 0031-9384 (94) 90238-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Becker က JB, Rudick CN, Jenkins WJ (2001) ။ အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစဉ်အတွင်းနျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေ neuroscience ။ 21, 3236-3241 [PubMed]
Berridge KC (2007) ။ ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပေါ်မှာဆွေးနွေးငြင်းခုံ: မက်လုံးပေး salience များအတွက်အမှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 391-43110.1007 / s00213-006-0578-x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE (2003) ။ ဆုလာဘ် parsing ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 26, 507-51310.1016 / S0166-2236 (03) 00233-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဘန်း PD, Mende Jo, Jr က Yemm RS, ရွှံ့စေး CM, နယ်လ်ဆင် SE, ဟေးယက် SH, Silvia WJ (2001) ။ oxytocin ovine endometrial Prostaglands လုပ်လိုက်တာ F2alpha ပေါင်းစပ် mediates သောဆယ်လူလာယန္တရားများ:, G ၏အခန်းကဏ္ဍ (ဈ) ပရိုတိန်းနှင့် mitogen-activated ပရိုတိန်း kinases ။ Biol ။ Reprod ။ 65, 1150-115510.1095 / biolreprod65.4.1150 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cabanac အမ်, Cabanac AJ, မိဘအေ (2009) ။ phylogeny အတွက်ဝိညာဏ်၏ပေါ်ပေါက်ရေး။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 198, 267-27210.1016 / j.bbr.2008.11.028 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Cacioppo JT, Berntson GG, Sheridan JF, McClintock MK (2000) ။ လူ့အပြုအမူ၏ Multilevel Integrated ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း: လူမှုရေးမှ neuroscience နှင့်လူမှုရေးနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာချဉ်းကပ်၏ complementing သဘောသဘာဝ။ Psychol ။ နွားလား။ 126, 829-84310.1037 / 0033-2909.126.6.829 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Camerer CF, Fehr အီး (2006) ။ ဘယ်အချိန်မှာ "စီးပွားရေးလူ" လူမှုရေးအပြုအမူကိုလွှမ်းမိုးပါသလဲ? သိပ္ပံ 311, 47-5210.1126 / science.1110600 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က CS, DeVries AC အ, Getz ll (1995) ။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေစျမယား၏ဇီဝကမ္မအလွှာ: မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole မော်ဒယ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 19, 303-31410.1016 / 0149-7634 (94) 00070-H ကို [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Carter က CS, Getz ll (1993) ။ မယားနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ။ သိပ္ပံ။ နံနက်။ 268, 100-106 [PubMed]
ရှမ်ပိန်အက်ဖ်အေ, Chretien P. , Stevenson မှ CW, Zhang က ty, Gratton အေ, Meaney MJ (2004) ။ နျူကလိယအတွက်အပြောင်းအလဲတွေဟာကြွက်များတွင်မိခင်အပြုအမူအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုနဲ့ဆက်စပ် dopamine accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 4113-412310.1523 / JNEUROSCI.5322-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
cho ဟာ MM, DeVries AC အ, Williams က JR, Carter က CS (1999) ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးအပေါ် oxytocin နှင့် vasopressin ၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 113, 1071-107910.1037 / 0735-7044.113.5.1071 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Curtis JT, ဝမ် Z. (2005) ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက် Ventral tegmental ဧရိယာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 86, 338-34610.1016 / j.physbeh.2005.08.022 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကုရှ BS, မာတင် Jo, Young က LJ, Carter က CS (2001) ။ မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် peptides ၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျက်စားရာနေရာအားဖြင့်ခန့်မှန်းနေကြသည်။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 39, 48-5810.1006 / hbeh.2000.1633 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကုရှ BS, Wynn-Edwards က Ke (2006) ။ အထီးကြွက်များတွင် estrogen receptor-alpha ဖြန့်ဖြူးလူမှုရေးအဖှဲ့အစညျးနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 494, 595-60510.1002 / cne.20826 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
နေ့ JJ, Roitman MF, Wightman RM, Carelli RM (2007) ။ Associative သင်ယူမှုအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine အချက်ပြအတွက်ပြောင်းလဲနေသောဆိုင်း mediates ။ နတ်။ neuroscience ။ 10, 1020-102810.1038 / nn1923 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans အက်စ်, Carter က CS (1995) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ Module (Microtus ochrogaster) corticosterone ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 92, 7744-774810.1073 / pnas.92.17.7744 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
DeVries AC အ, DeVries ကို MB, Taymans SE, Carter က CS (1996) ။ လူမှုရေးဦးစားပေးအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လိင် dimorphic ဖြစ်ကြသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 93, 11980-1198410.1073 / pnas.93.21.11980 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dewsbury DA (1975) ။ ကြွက် copulatory အပြုအမူအတွက်မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေ။ သိပ္ပံ 190, 947-95410.1126 / science.1188377 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Dewsbury DA (1987) ။ မယား၏နှိုင်းယှဉ်စိတ်ပညာ။ Nebr ။ Symp ။ စိတ်ရင်း။ 35, 1-50 [PubMed]
di Chiara G. အ, Bassareo V. (2007) ။ system ကိုနှင့်စွဲဆုလာဘ်: dopamine ဘာလုပ်ပေးနှင့်မပါဘူး။ ကြက်သွန်ဖြူ။ ထင်မြင်ချက်။ Pharmacol ။ 7, 69-7610.1016 / j.coph.2006.11.003 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Emlen ST, Oring LW (1977) ။ ဂေဟဗေဒ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရွေးချယ်ရေးနှင့်မိတ်လိုက်စနစ်များ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်။ သိပ္ပံ 197, 215-22310.1126 / science.327542 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Everitt BJ, Robbins TW (2005) ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ်။ neuroscience ။ 8, 1481-148910.1038 / nn1579 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fehr အီး, Camerer CF (2007) ။ လူမှု neuroeconomics: လူမှုရေးဦးစားပေး၏အာရုံကြော circuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 11, 419-42710.1016 / j.tics.2007.09.002 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Fiorino DF, Coury အေ, Phillips က AG က (1997) ။ နျူကလိယအတွက် dynamic အပြောင်းအလဲများကိုအထီးကြွက်များတွင် Coolidge အကျိုးသက်ရောက်မှုစဉ်အတွင်း dopamine efflux accumbens ။ ဂျေ neuroscience ။ 17, 4849-4855 [PubMed]
Fisher ကအိပ်ချ်, Aron အေ, Brown က ll (2005) ။ ရိုမန်းတစ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ: အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အာရုံကြောယန္တရားတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 493, 58-6210.1002 / cne.20772 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မုဆိုး CD ကို, လျူ Y. , Ouimet C. , ဝမ် Z. (2002) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ neurogenesis အပေါ်လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှု။ ဂျေ Neurobiol ။ 51, 115-12810.1002 / neu.10042 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Getz ll (1978) ။ microtine ကြွက်များ၏လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လူဦးရေသံသရာအပေါ်ထင်ကြေး။ ဇီဝဗေဒပညာရှင် 60, 134-147
Getz ll, Carter က CS (1996) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ-vole မိတ်ဖက်။ နံနက်။ သိပ္ပံ။ 84, 56-62
Getz ll, Carter က CS, Gavish L. (1981) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်စနစ်, Microtus ochrogaster: pair တစုံ-Bond အဘို့လယ်ပြင်နှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းသက်သေအထောက်အထား။ ပြုမူနေ။ Ecole ။ Sociobiol ။ 8, 189-19410.1007 / BF00299829 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Getz ll, Hofmann je (1986) ။ အခမဲ့-နထေိုငျမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးအဖှဲ့အစညျး, Microtus ochrogaster။ ပြုမူနေ။ Ecole ။ Sociobiol ။ 18, 275-28210.1007 / BF00300004 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gingrich ခ, လျူ Y. , Cascio C. , ဝမ် Z. , Insel TR (2000) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Dopamine D2 receptors (အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်လူမှုရေးပူးတွဲမှုများအတွက်အရေးကြီးပါသည်Microtus ochrogaster) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 114, 173-18310.1037 / 0735-7044.114.1.173 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Gobrogge KL, လျူ Y. , Jia X တို့မှာ, ဝမ် Z. (2007) ။ pair တစုံ-ကပ်လျက်တည်ရှိအထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကျူးကျော်အတူ anterior hypothalamic အာရုံကြော activation နှင့် neurochemical အသင်းအဖွဲ့များ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 502, 1109-112210.1002 / cne.21364 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
မီးခိုးရောင် GD, Dewsbury DA (1973) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် copulatory အပြုအမူများ၏အရေအတွက်ဖော်ပြချက် (Microtus ochrogaster) ။ ဦးနှောက်ပြုမူနေ။ Evol ။ 8, 426-45210.1159 / 000124368 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ခန်းမ ER (1981) ။ မြောက်အမေရိက၏နို့တိုက်သတ္တဝါများ။ နယူးယောက်မြို့ဂျွန် Wiley; ။
EA ၏, Young က LJ (2005) ကြိုးပုခက်။ Microsatellite မတည်ငြိမ်မှုဦးနှောက်နှင့် sociobehavioral စရိုက်များမှာမတူကွဲပြားမှုတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ သိပ္ပံ 308, 1630-163410.1126 / science.1111427 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Harbaugh WT, Mayr U. , Burghart DR (2007) ။ အခွန်ကောက်ခံခြင်းနှင့်မိမိဆန္ဒအလျောက်ပေးကမ်းမှအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုကုသိုလ်ဖြစ်လှူဒါန်းခြင်းများအတွက်စိတ်ရင်းထုတ်ဖေါ်။ သိပ္ပံ 316, 1622-162510.1126 / science.1140738 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Hoffman ဟာ RS, Koeppl JW (1985) ။ Zoogeography ။ ကမ္ဘာသစ် Microtus, Vol ၏ဇီဝဗေဒ၌တည်၏။ 8, Tamarin RH အ, အယ်ဒီတာ။ ed ။ (အထူးထုတ်ဝေမှု, Mammalogists ၏ American Society:), စစ 84-113 ။
Ikemoto အက်စ် (2007) ။ Dopamine ဆုလာဘ် circuitry: နှစ်ခု projection စနစ်များ ventral midbrain ထံမှနျူကလိယမှ accumbens-olfactory tubercle ရှုပ်ထွေး။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 56, 27-7810.1016 / j.brainresrev.2007.05.004 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Insel TR, Hulihan တီဂျေ (1995) ။ pair တစုံဘွန်းများအတွက်တစ်ဦးကကျား, မ-တိကျတဲ့ယန္တရား: monogamous voles အတွက် oxytocin နှင့်မိတ်ဖက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခြင်း။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 109, 782-78910.1037 / 0735-7044.109.4.782 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Insel TR, Shapiro LE (1992) ။ oxytocin အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူး monogamous နှင့်ဇနီးတစ်ယောက်ထက် ပို. voles အတွက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းကထင်ဟပ်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 89, 5981-598510.1073 / pnas.89.13.5981 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Insel TR, Young က LJ (2001) ။ ပူးတွဲမှု၏ neurobiology ။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2, 129-13610.1038 / 35053579 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Jansson အေ, စတိန်းအမ်, Tinner ခ, Zoli အမ်, Meador-Woodruff JH, Lew JY, Levey AI အ, Watson ဟာအက်စ်, Agnati LF, Fuxe K. (1999) ။ ကြွက်များ၏ ventral striatum အတွက် D1, D2, tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine Transporter immunoreactivities ၏ဖြန့်ဖြူးပုံစံများတွင်။ neuroscience 89, 473-48910.1016 / S0306-4522 (98) 00317-0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကယ်လီ AE (2004) ။ မှတ်ဉာဏ်နှင့်စွဲ: shared အာရုံကြော circuitry နှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ အာရုံခံဆဲလျ 44, 161-17910.1016 / j.neuron.2004.09.016 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kleiman DG (1977) ။ နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်စျမယား။ ဆိုးကျိုးဗျာ Biol ။ 52, 39-6910.1086 / 409721 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Kosfeld အမ်, Heinrich အမ်, Zak PJ, Fischbacher U. , Fehr အီး (2005) ။ oxytocin လူသားတွေအတွက်ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပါသည်။ သဘာဝတရား 435, 673-67610.1038 / nature03701 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Krueger အက်ဖ်, McCabe K. , Moll ဂျေ, Kriegeskorte N. , Zahn R. , Strenziok အမ်, Heinecke အေ, Grafman ဂျေ (2007) ။ အာရုံကြောယုံကြည်မှုဆက်နွယ်နေပါသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 104, 20084-2008910.1073 / pnas.0710103104 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lee ကဃ (2008) ။ ဂိမ်းသီအိုရီအများနှင့်လူမှုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အာရုံကြောအခြေခံ။ နတ်။ neuroscience ။ 11, 404-40910.1038 / nn2065 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လီအမ်, Fleming က AS (2003) ။ နျူကလိယ၏ differential ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရွှေ့ဆိုင်အမျိုးသမီးကြွက်များတွင်မိခင်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ shell ကိုနှင့် core ကိုငျဒသေ accumbens ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 117, 426-44510.1037 / 0735-7044.117.3.426 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lim က MM, လျူ Y. , Ryabinin AE, Bai Y. , ဝမ် Z. , Young က LJ (2007) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် CRF receptors မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက် preference ကို modulate ။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 51, 508-51510.1016 / j.yhbeh.2007.01.006 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lim က MM, Murphy က AZ, Young က LJ (2004a) ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက် Ventral striatopallidal oxytocin နှင့် vasopressin V1a receptors (Microtus ochrogaster) ။ ဂျေ comp ။ Neurol ။ 468, 555-57010.1002 / cne.10973 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lim က MM, ဝမ် Z. , Olazabal DE, Ren X တို့မှာ, Terwilliger EF, Young က LJ (2004b) ။ တစ်ခုတည်းဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးကြိုးကိုင်နေဖြင့်တစ်ဦးကရာမျိုးစိတ်အတွက် Enhanced မိတ်ဖက် preference ကို။ သဘာဝတရား 429, 754-75710.1038 / nature02539 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lim က MM, Young က LJ (2004) ။ အဆိုပါ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံ Vasopressin-မှီခိုအာရုံကြောဆားကစ်။ neuroscience 125, 35-4510.1016 / j.neuroscience.2003.12.008 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူ Y. , Curtis JT, ဝမ် Z. (2001) ။ အဆိုပါနှစ်ဦးနှစ်ဖက် septum အတွက် Vasopressin အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းရေးထိန်းညှိ (Microtus ochrogaster) ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 115, 910-91910.1037 / 0735-7044.115.4.910 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လျူ Y. , ဝမ် ZX (2003) ။ နျူကလိယမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံနှောင်ကြိုးဖွဲ့စည်းခြင်းကိုထိန်းညှိဖို့ oxytocin နှင့် dopamine interactive accumbens ။ neuroscience 121, 537-54410.1016 / S0306-4522 (03) 00555-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Loewenstein G. အ, Rick အက်စ်, Cohen ကို JD (2008) ။ Neuroeconomics ။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 59, 647-67210.1146 / annurev.psych.59.103006.093710 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Lynch WJ, တေလာ JR (2005) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်သိသိ amp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) လှုပ်ရှားမှုမော်ဂျူအောက်ပါ Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းဖို့လှုံ့ဆျောမှုအတွက် persistent အပြောင်းအလဲများကို။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 22, 1214-122010.1111 / j.1460-9568.2005.04305.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGuire ခ, Getz ll, Hofmann je, Pizzuto တီ, Frase ခ (1993) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် Natal ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့် philopatry (Microtus ochrogaster) လူဦးရေသိပ်သည်းမှု, ရာသီနှင့် Natal လူမှုရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေ။ Ecole ။ Sociobiol ။ 32, 293-30210.1007 / BF00183784 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGuire ခ, Novak အမ် (1984) ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole အတွက်မိခင်အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ် (Microtus pennsylvanicus), မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole (အမ် ochrogaster) နှင့်ထင်းရှူး vole (အမ် pinetorum) ။ Animation ။ ပြုမူနေ။ 32, 1132-114110.1016 / S0003-3472 (84) 80229-8 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
McGuire ခ, စယ် KD, Mahoney တီ, Novak အမ် (1992) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်ကိုယ်ဝန်အောင်မြင်မှုအပေါ်အိမ်ထောင်ဖက်ဖယ်ရှားရေး၏ဆိုးကျိုးများ (Microtus ochrogaster) နှင့်မြက်ခင်း voles (Microtus pennsylvanicus) ။ Biol ။ Reprod ။ 47, 37-4210.1095 / biolreprod47.1.37 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Missale C. , Nash SR, ရော်ဘင်ဆင် SW, Jaber အမ်, caron MG (1998) ။ Dopamine receptors: ဖွဲ့စည်းပုံကနေ function ကိုရန်။ Physiol ။ ဗျာ 78, 189-225 [PubMed]
Neve Ka, Seaman JK, Trantham-Davidson အိပ်ချ် (2004) ။ Dopamine အဲဒီ receptor အချက်ပြ။ ဂျေ Reception ။ signal ။ Transduct ။ res ။ 24, 165-20510.1081 / RRS-200029981 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Numan အမ်, Numan MJ, Pliakou N. , Stolzenberg DS, Mullins OJ, မာဖီ JM, Smith က CD ကို (2005) ။ အဆိုပါမိခင်ပြန်လည်ရယူခြင်းတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကြွက်များအတွက်မိခင်အပြုအမူ၏အခြားရှုထောင့်အပေါ် medial preoptic ဧရိယာ, ventral pallidum, ဒါမှမဟုတ်နျူကလိယ accumbens အတွက် D1 သို့မဟုတ် D2 dopamine အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 119, 1588-160410.1037 / 0735-7044.119.6.1588 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Oliveras ဃ, Novak အမ် (1986) ။ အဆိုပါမြက်ခင်း vole အတွက်ဖခင်၏အပြုအမူတစ်ခုနှိုင်းယှဉ် Microtus pennsylvanicusအဆိုပါထင်းရှူး vole အမ် pinetorum နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole အမ် ochrogaster Animation ။ ပြုမူနေ။ 34, 519-52610.1016 / S0003-3472 (86) 80120-8 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pecina အက်စ်, စမစ် KS, Berridge KC (2006) ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ Hedonic ပူအစက်အပြောက်။ အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 12, 500-51110.1177 / 1073858406293154 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pfaus JG, Damsma G. အ, Wenkstern ဃ, Fibiger HC (1995) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးသမီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens နှင့် striatum အတွက် dopamine ဂီယာတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res 693, 21-3010.1016 / 0006-8993 (95) 00679-K သည် [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Pfeiffer တီ, Rutte C. , Killingback တီ, Taborsky အမ်, Bonhoeffer အက်စ် (2005) ။ generalized အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုအားဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ဆင့်ကဲ။ proc ။ Biol ။ သိပ္ပံ။ 272, 1115-112010.1098 / rspb.2004.2988 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Phillips က PE, Stuber GD, Heien ML, Wightman RM, Carelli RM (2003) ။ Subsecond dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုကင်းရှာအားပေးအားမြှောက်။ သဘာဝတရား 422, 614-61810.1038 / nature01476 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Phillips က PE, ဝေါ်လ်တန် ME, Jhou TC (2007) ။ utility ကိုတွက်ချက်: mesolimbic dopamine ခြင်းဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက် preclinical သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 191, 483-49510.1007 / s00213-006-0626-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Richfield ek, Penney JB, Young က AB (1989) ။ ကြွက်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် dopamine D1 နှင့် D2 receptors အကြားခန္ဓာဗေဒနှင့်ဆှဖှေဲ့ပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience 30, 767-77710.1016 / 0306-4522 (89) 90168-1 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rilling ဂျေ, Gutmans ဃ, Zeh တီ, Pagnoni G. အ, Bern G. အ, Kilts C. (2002) ။ လူမှုရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောအခြေခံ။ အာရုံခံဆဲလျ 35, 395-40510.1016 / S0896-6273 (02) 00755-9 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ရော်ဘင်ဆင်သည် DL, Heien ML, Wightman RM (2002) ။ dopamine အာရုံစူးစိုက်မှုယာယီ၏ frequency dorsal နှင့် conspecifics ၏နိဒါန်းစဉ်အတွင်းအထီးကြွက်၏ ventral striatum အတွက်တိုးပွားစေပါသည်။ ဂျေ neuroscience 22, 10477-10486 [PubMed]
Roitman MF, ဝီ RA, Carelli RM (2005) ။ နျူကလိယတွင် neuron ပင်, ကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိအရသာလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ညှိသူတို့ရဲ့ခန့်မှန်းဝှက်နှင့်မော်တာ output ကိုချိတ်ဆက်နေကြပါတယ် accumbens ။ အာရုံခံဆဲလျ 45, 587-59710.1016 / j.neuron.2004.12.055 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Roitman MF, ဝီ RA, Wightman RM, Carelli RM (2008) ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် real-time ဓာတုတုံ့ပြန်မှုကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုခွဲခြား။ နတ်။ neuroscience ။ 11, 1376-137710.1038 / nn.2219 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Rutte C. , Taborsky အမ် (2007) ။ ကြွက်များအား Generalized အပြန်အလှန်အ။ PLoS Biol 5, e196.10.1371 / journal.pbio.0050196 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Salamone JD ကော်ရဲရားအမ် (2002) ။ အားဖြည့်များ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအမြင်များ: နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့သက်ရောက်မှုတွေ dopamine accumbens ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res 137, 3-2510.1016 / S0166-4328 (02) 00282-6 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sanfey AG က (2007) ။ လူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချ: ဂိမ်းသီအိုရီအများနှင့် neuroscience ကနေထိုးထွင်းသိမြင်။ သိပ္ပံ 318, 598-60210.1126 / science.1142996 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Sanfey AG က, Rilling JK, Aronson ဂျာ Nystrom LE, Cohen ကို JD (2003) ။ ယင်းရာဇသံကိုဂိမ်းထဲမှာစီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သိပ္ပံ 300, 1755-175810.1126 / science.1082976 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Schultz ဒဗလျူ (2002) ။ dopamine နဲ့ဆုလာဘ်နှင့်အတူတရားဝင်ရယူခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ 36, 241-26310.1016 / S0896-6273 (02) 00967-4 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ကိုယ်ပိုင် DW, Genova LM, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Barnhart WJ, Spencer JJ, Nestler EJ (1998) ။ ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူ၏ relapse အတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်စခန်း-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ဂျေ neuroscience ။ 18, 1848-1859 [PubMed]
Skuse DH, Gallagher L. (2009) ။ လူမှုရေးဦးနှောက်ထဲမှာ Dopaminergic-neuropeptide interaction က။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn ။ သိပ္ပံ။ 13, 27-3510.1016 / j.tics.2008.09.007 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Tankersley ဃ, Stowe CJ, Huettel လုပ် SA (2007) ။ Altruism အေဂျင်စီတစ်ခုတိုးလာအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ နတ်။ neuroscience ။ 10, 150-15110.1038 / nn1833 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ်ဂျာ Birney EC (1979) ။ မိဘစောင့်ရှောက်မှုနှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ vole ၏မိတ်လိုက်စနစ်, Microtus ochrogaster။ ပြုမူနေ။ Ecole ။ Sociobiol ။ 5, 171-18610.1007 / BF00293304 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
သောမတ်စ်လုပ် SA, Wolff Jo (2004) ။ Pair ကို Bond နှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles ထဲမှာ "မုဆိုးမအကျိုးသက်ရောက်မှု" ။ ပြုမူနေ။ လုပ်ငန်းစဉ်များ 67, 47-5410.1016 / j.beproc.2004.02.004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Trivers RL (1971) ။ အပြန်အလှန် altruism ၏ဆင့်ကဲ။ ဆိုးကျိုးဗျာ Biol ။ 46, 35-5710.1086 / 406755 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် Z. , Hulihan တီဂျေ, Insel TR (1997) ။ လိင်နှင့်လူမှုရေးအတွေ့အကြုံအပြုအမူနှင့်အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်အာရုံကြော activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဦးနှောက် Res ။ 767, 321-33210.1016 / S0006-8993 (97) 00617-3 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် Z. , ယု G. အ, Cascio C. , လျူ Y. , Gingrich ခ, Insel TR (1999) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေး၏ Dopamine D2 အဲဒီ receptor-mediated စည်းမျဉ်း (Microtus ochrogaster): pair တစုံဘွန်းများအတွက်ယန္တရား? ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 113, 602-61110.1037 / 0735-7044.113.3.602 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝမ် ZX, Aragona BJ (2004) ။ အထီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် pair တစုံဘွန်း၏ Neurochemical စည်းမျဉ်း။ Physiol ။ ပြုမူနေ 83, 319-328 [PubMed]
ဝမ် ZX, Novak အမ် (1992) ။ မြက်ခင်း voles ၏မိဘအပြုအမူနှင့် pup ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (Microtus pennsylvanicus) နှင့်မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles (အမ် ochrogaster) ဂျေ comp ။ Psychol ။ 106, 163-17110.1037 / 0735-7036.106.2.163 [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ဝီ RA, ကြိုး RC, ဂျုံးစ် JL, Slater JM, Grigson PS, Carelli RM (2008) ။ အမူအကျင့်များနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ၏ electrophysiological ညွှန်းကိန်းကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးကြိုတင်ခန့်မှန်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ 57, 774-78510.1016 / j.neuron.2008.01.024 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Williams က JR, Catania KC, Carter က CS (1992) ။ အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်မိတ်ဖက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး (Microtus ochrogaster): လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 26, 339-34910.1016 / 0018-506X (92) 90004-F [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Winslow JT မိပြီ N. , Carter က CS, Harbaugh CR, Insel TR (1993) ။ monogamous မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက်တစ်စုံ Bond အတွက်ဗဟို vasopressin တစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝတရား 365, 545-54810.1038 / 365545a0 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA (2004) ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 5, 483-49410.1038 / nrn1406 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Witt DM, Carter က CS, Insel TR (1991) ။ oxytocin အဲဒီ receptor အမျိုးသမီးမြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် binding: endogenous နှင့် exogenous oestradiol ဆွ။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 3, 155-16110.1111 / j.1365-2826.1991.tb00258.x [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Witt DM, Carter က CS, ဝေါ်လ်တန် DM (1990) ။ မြက်ခင်းလွင်ပြင်ဒေသမှာ voles အတွက် oxytocin အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုနှင့်အရံသက်ရောက်မှု (Microtus ochrogaster) ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 37, 63-6910.1016 / 0091-3057 (90) 90042-G [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်တို့ LJ, Lim က MM, Gingrich ခ, Insel TR (2001) ။ လူမှုရေးပူးတွဲမှု၏ဆယ်လူလာယန္တရားများ။ Horm ။ ပြုမူနေ။ 40, 133-13810.1006 / hbeh.2001.1691 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
လူငယ်တို့ LJ, ဝမ် Z. (2004) ။ pair တစုံဘွန်း၏ neurobiology ။ နတ်။ neuroscience ။ 7, 1048-105410.1038 / nn1327 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zak PJ (2004) ။ Neuroeconomics ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ , B, Biol ။ သိပ္ပံ။ 359, 1737-174810.1098 / rstb.2004.1544 [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zak PJ, Kurzban R. , Matzner WT (2004) ။ ယုံကြည်မှု၏ neurobiology ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1032, 224-22710.1196 / annals.1314.025 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]
Zald DH, Boileau ဗြဲ, el-Dearedy ဒဗလျူ, ဂွန် R. , McGlone အက်ဖ်, Dichter GS, Dagher အေ (2004) ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် Dopamine ဂီယာ။ ဂျေ neuroscience ။ 24, 4105-411210.1523 / JNEUROSCI.4643-03.2004 [PubMed] [လက်ဝါးကပ်တိုင် Ref]